Semalt - Mazano Anogutsa Pamusoro Pokuti Ungasvina Sei Google Analytics Spam
VaHackers vave vachishanda munzira dzekupinda muwebsite yenyu mushure mekugadzira nzira dzakagadzirirwa kuti dzivadzivise. Mazuva ano, vanosarura vari kushandisa zvinyorwa zvenhema, uye Google Analytics spam nechinangwa choga chokutungamirira vashanditi kune webasaiti yepamu. Kuzarura kunyoreswa kwemashoko nemashoko asingakanganisi kunogona kuvhiringidza zvikuru.
Kwemavhiki mashomanana apfuura, vatengesi vave vachitumira kutumira spam kune vashandisi nechinangwa chekuvhiringidza nevatengi ve data uye kugadzira kufamba kune mamwe mawebhusayithi ane njodzi. Mushure mekutsvaga kutengesa kunyoresa, vashandisi vanoendeswa kunzvimbo yakaipa iyo ine virusi uye malware - white dianabol tablets 10 mg opana. Iyo virus yeHIV yakave yakashandiswa zvakanyanya nevatori vechikwata kugoverana kutumira mapepa anoguma kugadzirisa zvakare maklayiti malware uye nzvimbo dzisina kunaka dzepaIndaneti.
Michael Brown, Mutungamiriri weKuteresi Achibudirira we Semalt , anopa zvinhu zvinokurudzira kuti zvikubatsire kubvisa kutumira spam.
Chiitiko cheGoogle Analytics Spam
Kufuratira kunoshandiswa kushandiswa nekushandiswa kwemasayiti ediki, zvichida pane data yavo kana ichienzaniswa newebsite huru. Mushure mokutora kutarisa kwemotokari yenyu, vateereri vanoshandisa zvakanaka vatengi vanoshanyira webhusaiti kuburikidza nekudzorerazve kune dzimwe nzvimbo dzisina kuwanikwa. Maererano neII nyanzvi, zvinodarika 50% zvemotokari dzinowanzoendeswa zvakare nevarume vanonyadzisira munzvimbo dzemajeri, mamiriro ezvinhu anonyanya kukanganisa kuwanda kwewebhu webhusaiti yekufambira mberi.
Mamwe mashoko ari nyore, webhusaiti yakagadzirirwa neHIV virus inoita kuti kugoverana kunoshandiswa kupararira kwose kwose, mamiriro ezvinhu anoparadza chizvarwa che data traffic uye kushandiswa kwevashandisi. Kuendesa kwenhema neGoogle Analytics spam zvinoshatisa kubvisa muzinga wewebsite.
Nzira yekutsvaga kunze kwenhema referral spam
Kuva nehanya paunenge uchitsvaga uye kufungidzira kutumira kune zvakakosha pazvinouya pakushambadzira kweInternet. Nzira dzakasiyana-siyana dzave dzaiswa mberi kuti dzifurwe kunze kwekutsvaga kunyoresa spam, Trojan virus, uye malware iyo inobatsira kuti mawebsite anobata sei.
Hasi-mweya kutumira spam kunowanzotarisa kushandiswa kwevashandisi vekupedzisira uye kunotora ruzivo rwemigwagwa munguva refu. Kuti abvise mapepa ose evanhu vasiri ghost kutumira spam, tanga firiji kuti isabvisa zvose kutumira spam kunobva kune imwe nzvimbo inozivikanwa. Megalytic ndiyo inowanzozivikanwa isiri-mweya kutumira spam. Kuti uwane mufananidzo wakajeka wekusaita mweya kutumira spam kushanyira webhusaiti yako, enda kuAkuwana uye tora pa 'All Traffic'. Vhurai Zvinyorwa uye uwedzere zita reimba iyo inowanzoshanda senhengo yechipiri.
Kuendesa kweMweya kunoumbwa mumabhuku ako webhusaiti nekushanyirwa kwepurogiramu. Pano, mweya inotumira vanhu inoshanda kuti iparidze dambudziko rakaipa uye rakaipa kune Google Analytics. Mukufamba kwenguva, data yekutengesa inowanikwa yakawedzerwa kumugumo wako. Kuti kubvisa mweya kutumira spam kubva kumushumo wako, ita zvisikwa zvitsva, uye wobva wawedzera mafiritsi ayo achabvisa zvose mweya kutumira spam kubva munhoroondo yako.
Munyika yeGoogle Analytics, kutumira spam kunosvika pakuvhiringidza kwaro kunobata mhinduro dzewebsite zvisina kunaka. Nzira dzinoverengeka dzezvigadzirwa uye zvishandisi zvirikudziridzwa neGoogle kufuta kunze kutumira spam. Usati waona chero kutumira, vashandi vekupedzisira vanokurudzirwa kuti varinde uye chengetedza kutendeseka kwekutumira. Izvo zviri pamusoro-zvinokurukurwa maitiro ekutsvaga zvichakubatsira iwe kudzivisa uye kubvisa malware yakafanana neTrojan virus uye kutumira spam kubva pawebsite yako.